Last updated: May. 26 2018 | 2 min akhri
Haddii ay ka timaadaa saaxiibadood, waalidiinta, lulataaye, ama Hollywood, waxaan oo dhan waxay leeyihiin macluumaad been ah madaxeena ee ku saabsan galmada. Nasiib wanaag, waxaan halkan u joogaan inay caawiyaan rayi qaar ka mid ah khayaallada ugu qosol ah.
Khuraafad #1: Waxaad u sheegi kartaa sida weyn nin ee guska waa ay kabaha size uu, waayo, sida Hadalku tagaa “hadii uu cagaha weyn…”. Tani waa been. Waxaa gabi ahaanba waa xariir ah oo ka dhaxeeya baaxadda guska iyo size kabaha no. Tani waxay sidoo kale ah size gacanta iyo size dhegta.
Khuraafad #2: The ka weyn guska, qancisay in ka badan naagtii waxay heli doontaa. Beenta ah, size dhab waxba u qaban qadarka Naciima leeyahay, waxaa inta badan kaliya leedahay in la sameeyo nin ee ego. The G-Spot waxa uu ku yaalaa laba inch gudaha siilka iyo waa madaxa guska in ay u dareen halka eridaan. Dhab ahaantii, guska weyn, marar badan ayaa seegi-G Spot wadajir. Sidaas aragti, size hoos yimaado xulashooyinka aan ku qanacsan.
Khuraafad #3: Waa wax aan macquul qof dumar ah oo ay ku uuraysato ilmo intii ay horay u yahay uurka leh. Beenta ah, magacaabo superfetation, qof dumar ah oo dhab ahaantii aad uuraysato kartaa inta aad uurka leedahay inkasta oo ay aad dhif u ah.
Khuraafad #4: Guurka Fasaadiyaan doonaa nolosha galmada. Tani waa been. Sex, dhab ahaantii, hagaagaysa ka dib markii guurka. Baaritaanadii u danbeeyay ayaa tilmaamaya in is qaba waxaa ay ku qanacsan sare, Isku day qaabab kala duwan, iyo jeer ka badan galmo.
Khuraafad #5: Haweenka aanad daawan lulataaye. Mar fikir. Iyada oo dad badan oo aan qiran laga yaabaa, Haweenka daawado badan oo lulataaye. Intii lagu guda jiray cilmi-baarista dhawaan, 85% haweenka ayaa qirtay inuu lulataaye daawaday. Sidaas waxa ay u muuqataa in haweenka u daawadaan oo kaliya sida ugu badan ee ragga.
Khuraafad #6: Ma aad heli doontid uurka leh haddii aad galmo ee barkad ama tuubbooyinka biyaha kulul. Daraasado ayaa cadeeyay in tubbada kulul muddo ka badan 30 daqiiqo hoos u dhigi karaan tirada manida; Si kastaba ha ahaatee, Ma jiro wax biyo ah heerkul ama nooca kiimikada dili doonaa manida. Marka shahwadda galo siilka, hadafkeeda waa in la helo ukunta bacrimiya, waxba joojin doono.
Khuraafad #7: Dadka Old aadan galmo. Inkastoo uu cudurku, geeri lammaane ah, Dhibaatooyinka ay keento daawo ka mid ah sababaha kale noqon kartaa caqabad ah, da aanu galmo aan joojiyo. Galmada waa arrin joogto ah weligeed-dheer ee xaalada aadanaha in aanu xeerku da, muuqaalka jirka, caafimaadka, ama awoodda functional. Dhab ahaantii, Inta badan dadka galmo ahaan firfircoon joogo si fiican u da '. On top of in, galmo caadi ah ee dadka waayeelka ah waxay kaa caawin karaan maskax ahaan iyo jidh.
Halganka u heshaan aad G-booska? Waa waqtigii sare in aad joojiso ceyrsaneysa la Midyahay Dhalanteed iyo…
Ka hadal sidaad u Love la'aanteed Words
Extreme waxa ugu fiican ayaa sheegay in markii ay ku yidhaahdeen, “In ka badan erayada waa in aad u leeyihiin in ay dhan…
Waa maxay Haweenka fikir marka galmada
Inkastoo galmada waa gaar ah, saaxiib, in-the-xilligan fal, mararka qaarkood, oyna haweenka u muuqdaan in ay dhumiyaa, samayn ma…